Xulka Puntland oo u soo gudbay kulanka finalka ee tartanka ciyaaraha Dowlad goboleedyada
Xulka Puntland ayaa sanadkii labaad ee isku xigta tartanka ciyaaraha kubbada cagta dowlad goboleedyada u soo gudbay kulanka kama dambaysta ah kadib markii uu 1-0 ugaga badiyay xulka gobolka Banaadir.
Maamulka Puntland oo War murtiyeed ka soo saaray shirka Kismaayo (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • October 6, 2017
Baarlamaanka Puntland oo ansixiyay Golihii Wasiirada uu dib u soo magacaabay C/wali Gaas
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa maanta hor-geeyay Baarlamaanka, Golaha Wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqay todobaadkii hore, kaddib markii bishii la soo dhaafay ay kalsoonida kala laabteen Xildhibaanada.
Puntland oo lagu eedeeyay inay sabab u aheyd fashil ku yimid shir ka dhici lahaa Seychelles
Sagal Radio Services • News Report • May 21, 2017
Wasiirka Kalluumeysiga Xukuumadda Soomaaliya C/raxmaan Cabdi Xaashi ayaa ku eedeeyay Maamulka Puntland inuu sabab u ahaa fashil shir looga hadli lahaa heshiis laga gaaro sidii loo qeybsan lahaa Kalluunka loo yaqaano Tuunaha oo ka dhici lahaa Jaziirada Seychelles.
Shaqaale iyo Markabkii lagu afduubtay xeebaha Puntland oo la sii daayay
Wararka ka imanaya degmada Calula ayaa sheegaya in burcad badeedii afduubatay markab shidaalka qaada ay sii daayeen kadib wadahadalo ay la galeen dowlad goboleedka Puntland.
Taliye kuxigeenkii Booliska Puntland oo u geeriyooday dhaawac iyo Al-Shabaab oo sheegatay
Taliye kuxigeenkii saddexaad ee Ciidamada Booliska Puntland G/lle Jaamac Saxar-diid ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray weerar dabley hubeysan shalay ku qaadeen gudaha magaalada Boosaaso
Madaxweyne ku xigeenka Puntland “Nabbada Gaalkacyo ma wanaagsana in magaalo kale loo aado”
Sagal Radio Services • News Report • November 16, 2016
Madaxweyne ku xigeenka Puntland C/Xakiin Cumar Cameey, oo warbaahinta la hadlay ayaa ka dhawaajiyay in nabadda magaalada Gaalkacyo haboon tahay in looga dambeeyo odayaasha dhaqanka iyo culumada gobolka Mudug.
Wararka ka imaanaya magaalada Garowe ayaa sheegaya in goor dhow oo maanta ah lagu dhawaaqi doono liiska musharixiinta Puntland u matali doonto aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
Puntland oo Iridaha u laabtay Xalay Xarumihii RADIO DALJIR ee Garoowe iyo Boosaaso
Sagal Radio Services • News Report • June 24, 2016
Maamulka Puntland ayaa Xalay Albaabada u laabay Xarumihii uu Radio Daljir ku lahaa Magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso, waxaana la sheegay in xariggooda loo cuskaday amar kasoo baxay Taliyiaha Booliiska Puntland, Jen. C/qaadir Shire Faarax [Ereg].
Madaxweynaha Puntland C/wali Gaas oo fariin u diray Al-Shabaab
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii Guddoomiyihii Haweenka Gobolka Mudug Dhudi Yuusuf Aadan, isagoo ku eedeeyay Al-Shabaab marka looga soo adkaado dagaalada inay dib ugu soo laabtaan birimigeydada oo ay dilaan.
Puntland oo ka digtay in wax ka bedel lagu sameeyay heshiiskii hanaanka doorashada 2016
Golaha Wasiirada Maamulka Puntland ayaa ka digay in wax ka bedel lagu sameeyo heshiiskii ku aadanaa hanaanka doorashada ee 2016, iyadoo shirarka ka socda magaalada Muqdisho looga gol leeyahay in lagu saxo qaladaadka ku jira heshiiskaas.
Gaas oo maanta booqanaya goobihii Ciidamada Puntland kula dagaalameen Al-Shabaab
Puntland oo soo bandhigtay Maxaabiistii lagu qabtay dagaalkii Togga Suuj (Sawirro)
Ciidamada Puntland ee ka dagaalamay Togga Suuj ayaa soo bandhigay maxaabiis ay ku qabteen dagaalkii halkaas ka socday maalmihii la soo dhaafay, waxaana saraakiisha Puntland ay sheegeen inay si rasmi u soo afjareen dagaalkii halkaas ka socday.
Puntland “Ciidamada NATO ee ku sugnaa Xeebaha kama hortagin duulaankii Al-Shabaab”
Maamulka Puntland ayaa ku dhaliishay Ciidamada NATO ee ku sugan Xeebaha Soomaaliya inay ka qeyb qaadan waayeen ka hor-tagga dagaalyahanadii ka tirsanaa Al-Shabaab ee 14-kii bishan doonyaha ku galay deegaanada xeebaha ee Gobolada Nugaal iyo Mudug.
Abaaro laga soo sheegayo Puntland
Sagal Radio Services • News Report • February 12, 2016
Cunto yari iyo biyo la,aan baahsan ayaa laga soo sheeggayaa deegaano badan oo hoos yimaada maamulka Puntland ee Soomaaliya.
PUNTLAND: Xubnaha Baarlamaanka Puntland oo Doortay Guddoomiye Cusub
Baarlamaanka Puntland ayaa diyaar-garow xooggan ugu jiray doorashada gudoomiyahooda cusub ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Garowe ku doortay Axmed Cali Xaashi oo noqon doona gudoomiyaha cusub ee barlamaanka maaamulka Puntland.
Maamulka Puntland oo soo bandhigay Doonyo iyo kalluumeysato ajaanib ah (Sawiro)
Ciidanka badda ee Maamulka Puntland ayaa maanta soo bandhigay doonyo ay ku soo qabqabteen hawlgallo ay dhawaan sameeyeen xeebaha Puntland.
Puntland oo ka hor-timid in xayiraad la saaro heshiisyadii Shidaalka Soomaaliya
Hey’adda Batroolka iyo Macdanta Puntland ayaa qaadacday soo jeedinta Kooxda Qaramada Midoobey u qaabilsan la socodka cunaqabateynta Hubka saaran Soomaaliya iyo Eritrea ee ahaa in xayiraad la saaro heshiiyada shidaalka, si aanay qal qal u galin xasiloonida dalka.
Puntland oo cambaareysey qaabka Somaliland ula dhaqantey qaxootiga Yemen
Puntland ayaa cambaareysey go'aankii Somaliland dib uga celisey qaxootigii ka yimid dalka Yemen ee maalmo kahor soo gaarey magaalada Berbera.
Puntland oo ka laabatay amarkii ay shaqada uga joojiyeen Xafiisyadii Telefishinka Qaranka
Maamulka Puntland ayaa sheegay inay dib u fasaxeen howlihii Telefishinka Qaranka ee SNTV uu ka hayay deegaanadooda, kadib markii shalay ay shaqada ka joojiyeen.
Ururka Suxufiyiinta Puntland ee MAP oo si Adag u Cambaareeyay Dilkii Silver
Maxkamadda ciidanka Puntland Xukunno kala duwan ku riday laba eedeysane
Maxkamadda ciidamada Puntland ee Garoowe ayaa xukunno dil iyo xabsi ah ku ridday laba eedeysane oo ay sheegtay in lagu helay inay ku lug lahaayeen falal argagaxisanimo.
Wasiirka Ganacsiga PL oo sheegay in la kala diray hoggaanka Rugta Ganacsiga
Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha ee Puntland ayaa soo saartay amar lagu kala dirayo hoggaanka Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha.
Gabar Weriye ah oo xalay magaala-madaxda P/land ee Garoowe lagu xiray
Ciidamada booliska ee gobolka Nugaal ayaa xalay saqdii dhexe hoteel ay magaalada Garoowe ka deggen tahay kala baxay Weriye Faadumo Yuusuf Siciid (Taxadar) oo kamid ah weriyeyaasha ka howlgala magaalada Boosaaso.
Puntland oo “musiibo qaran” u aqoonsatay kalluumeysiga sharci darrada
Maamulka Puntland ayaa u aqoonsaday kalluumeysiga sharci darrada inuu yahay “musiibo qaran” oo u baahan in si adag looga jawaabo.
Madaxweynaha Puntland oo Magacaabay Gudi wasiiro ah oo baara Khilafka u dhexeeya Puntland iyo Dowladda Dhexe
Madaxwaynaha dowladda Puntland Dr.Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas) ayaa maanta guddi wasiiro ah u saaray sidii xal looga heli lahaa baarisna loogu samayn lahaa qodobada ay isku hayaan Puntland iyo Dowladda uu madaxwaynaha ka yahay Xasan Shiikh Maxamuud.
Puntland oo Taageertay mid ka mid ah Maamulladii Baydhabo lagu dhisay
Taliye cusub oo loo magacaabay Ciidamada daraawiishta Puntland ee aagga Gala-gala, kadib dilkii Taliyihii hore
Taliye cusub ayaa loo magacaabay ciidamada daraawiishta ee ku sugan aagga Gal-gala ee dagaalka kula dagaalyahanada Shabaab, kadib dilkii 17-kii bishan duleedka Boosaaso loogu geystay Taliyihii hore Col. Jaamac Saciid Afgaduud.
Codeynta doorashada Guddoomiyaha cusub & ku xigeennada baarlamaanka Puntland oo Goor-dhow billaabatay (SAWIRRO)
Waxaa billaabatay doorashadii guddoomiyaha iyo ku xigeennada baarlamaanka Puntland, iyadoo ay xilalkan isku soo taageen xubno kala duwan oo uu ku jiro mas'uulkii horay u hoggaamin jiray baarlamaanka Puntland.
Magacyada Xildhibaanada u sharraxan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka Baarlamaanka Puntland
Berri waxay xildhibaannada baarlamaanka Puntland -ee maalmo kahor la dhaariyey- ay dooran doonaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka golaha, waxaana jira tiro xildhibaanno ah oo labadaas xil u sharraxan.
Akhriso magacyada xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo la soo saaray
Liiska xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee sanadka 2014, ee xalay Guddiga Xallinta Khilaafaadka iyo Ansxinta ay shaaciyeen, waxaa ka dhex muuqda in badan oo kamid ah xildhibaanadii ku jirey baarlamaankii uu waqtigiisu dhamaaday. Gobollada ay xildhibaanada badani dib usoo laabteen waxaa kamid ah: Sool, Cayn, Sanaag iyo Haylaan.
Madaxweynaha Puntland C/raxmaan Maxamed (Faroole) ayaa maanta magacaabay Guddiga Xallinta Khilaafaadka iyo Ansixinta, guddigan oo ka kooban siddeed xubnood waxaa ku jira aqoon yahanno caan ka ah Puntland iyo weliba cuqaal.
Falanqeyn Khubdadii Madaxweyne Faroole & Xaalada siyaasadeed ee Puntland
Waxaa shalay gegida diyaaradaha ee Garowe ka dhoofey Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, safarka Faroole ayaa ku wajahnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana la filayaa in uu uga sii gudbo dalal kale, haddaba sida caadadda u ahayd Madaxweynaha waxa uu la hadley saxaafadda waxaana ka mid ahaa waxyaabihii uu ka hadley doorashada la sheegay in ay dhamaadka sanadkan 2013 ama kan xiga bilowgiisa ka dhici doonto deegaanada Puntland taas oo loogu tartamaayo Guddoomiye Baarlamaan, Madaxweyne iyo ku xigeenkiis.
Guddiga doorashooyinka Puntland oo waqti kama dambeys ah qabtay
Guddiga doorashooyinka Puntland, ayaa sheegay in bishan May 11-keeda ay ku eg tahay xilliga la soo gudbin karo musharixiinta ka qeyb qaadanaya doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland oo bartamaha sanadkan dhacaya.
Puntland oo hay'adaha caalamiga ee ka shaqeeya deegaannada Puntland la xisaabtameysa
Wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Puntland, ayaa wadda barnaamij lagula xisaabtamayo hay’adaha caalamiga ah ee ka howl gala deegaannada Puntland iyo wax qabadkooda.
Ciidamada Puntland oo soo qabtay markab shamiinto ku daadinaayay xeebaha Bari
Ciidamada badda ee maamulk gobolkeedka Puntland,ayaa shaaca ka qaaday inay gacanta ku soo dhigeen markab laga leeyahay dalka waqooyiga Korea, kaas oo si sharci darro ah xeebaha Soomaaliya ku soo galay, shameento hallowdayna ku qubayay xeebaha Bari, sida ay baahisay idaacadda Risaala ee Muqdisho.
Somalia's al Qaeda-linked militants are moving north into the semi-autonomous region of Puntland, long regarded as a relatively peaceful area, after having been squeezed out of their strongholds further south, the president of Puntland said.
Puntland oo xabsiga dhigtay mid kamid ah kaaliyayaashii madaxweyne Cadde Muuse
Ciidamada ammaanka ee magaalada Boosaaso, ayaa maanta xabsiga u taxaabay xog-hayihii guud ee madaxweynihii hore ee Puntland Jeneral Cadde Muuse Xirsi.
Dadka ku dhaqan deegaannada xeebaha Puntland oo dabeylo looga digay
Maamulka gobolka Bari ayaa maanta shaaciyay in ay soo gaareen fariimo kaga yimi dhinaca hay'adda saadaasha hawada ee caalamiga ah oo sheegaya in laga digtoonaado Roobab wata dabeylo xoogan iyo duufaano in ay ka da'ayaan Deegaano xeebeedyo ka tirsan gobolka bari.
Doon hub sharci darro ah wadday oo Puntland lagu qabtay
Sagal Radio Services • News Report • October 19, 2012
Ciidamada ammaanka Gobolka Bari ayaa gacanta ku dhigay dooni ay saarnaayeen Hub iyo waxqaabo qarxa, kaasoo lagu arkay xeebta deegaanka Qandala ee Gobolka Bari.
Madaxweynaha Puntland "Hala ila tartamo"
Sagal Radio Services • News Report • October 17, 2012
Madaxweynaha maamulka Puntland, ayaa ugu baaqay siyaasiyiinta Puntland ka soo jeeda ee dooneya inay u tar tamaan xilka madaxtinnimo ee maamul goboleedkaasi, inay dhaleeceynta banaannada joojiyaan, oo isaga lala tartamo.
Puntland oo shuruud ku xirtay la shaqeynta dowladda cusub ee Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • October 7, 2012